नेपाल आइडल तेेेेेेस्रो सिजन विजेता सज्जाको विगतदेखि वर्तमान् – जीवन शैली
नेपाल आइडल तेेेेेेस्रो सिजन विजेता सज्जाको विगतदेखि वर्तमान्
Home /प्रमुख समाचार/नेपाल आइडल तेेेेेेस्रो सिजन विजेता सज्जाको विगतदेखि वर्तमान्
काठमाडौं : नेपाल आइडल सिजन-३ को उपाधि मोरङकी सज्जा चौलागाईले जितेकी छन् । आज भएको फाइनलमा प्रवीण बेडवाल र किरण भुजेलको भन्दा बढी भोट ल्याएर सज्जाले आइडलको उपाधि जितेकी हुन् । उपाधिसँगै उनले ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पनि प्राप्त गरेकी छन् ।
त्यस्तै, फस्ट रनरअप प्रवीण बेडुवालले १० लाख र सेकेन्ड रनरअप कीरणकुमार भुजेलले ५ लाख नगद प्राप्त गरेका छन् ।
एपी वान एचडीबाट हरेक हप्ता बिहीबार र शुक्रबार प्रसारण हुँदै आएको यो रियालिटी सो नेपाली सांगीतिक इतिहासको सर्वाधिक रुचाइएको कार्यक्रम हो ।
लकडाउनका कारण यो वर्षको नेपाल आइडलको फिनाले ढीला भएको हो । कोरोनाका कारण रोकिएको कार्यक्रम करिब तीन साताअघि पुनः सुरु भएको थियो । कार्यक्रमको निर्णायक मण्डलमा इन्दिरा जोशी, न्ह्युु वज्राचार्य र कालीप्रसाद बाँस्कोटा रहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस सुरु हुँदै नेपाल आइडल
को हुन् सज्जा चौलागाईं?
मोरङ पथरीकी सज्जा चौलागाईं नेपाल आइडलकी उत्कृष्ट प्रतियोगी हुन् । नेपाल आइडलमा छनोट भएसँगै उनको रक पप र भर्सटायल गायकीको चर्चा हुन थाल्यो । उनको प्रस्तुति र बोल्ड स्वरको हरेक कार्यक्रममा प्रशंसा हुने गर्छ ।
याे पनि पढ्नुस सुदूरपश्चिमका कमल सोव आइडलको उत्कृष्ट ११ मा, भोटको अपिल
पहिलो पटक उनले फ्लेवर्स रेस्टुरेन्ट तारागाउँमा गाएकी थिइन् । गाएर कमाएको पहिलो कमाइ पाँच सय रपैयाँ थियो । उनका आमाबुवाले गाउन सधैं सहयोग गर्छन् । ब्याचलर्सकी विद्यार्थी सज्जा नेपाल आइडल सिजन-३ को अडिसनले यता तानिएकी हुन् ।
याे पनि पढ्नुस बाहिरिइन् ममता गुरुङ, को–को पुगे नेपाल आइडलको ‘टप–८’मा?
हरेक प्रतियोगी एकसे एक भएकाले आफू नै विजेता बन्नेमा ढुक्क भने छैनन् उनी । ‘टप फाइभमा पुग्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो’, उनले सुनाइन् ।